About - GAE - GREEN ALLIANCE ENERGY GROUP
GAE - Green Alliance Energy Group
GAE Business Group isawholly Myanmar citizen owned business group which was founded of National entrepreneurs and objective is to do business in the new wave of economic and political changing in Myanmar.
It was incorporated with the number 1309/2015-2016 (NPT) at the companies registration office, ministry of planning and finance, the government of the union republic of Myanmar.
Although the mainstay business of GAE Group is the INVESTMENT and we are also operating in the various business sectors such as oil& gas, services, trading and construction with the systematically planning and implementation according to leading of management expert, experienced executive , excellence advisors and business consultants.
[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/GreenAllianceEnergy.gae/” fb_appid=”OPTIONAL_SEE_FAQ” box_width=”305px” box_height=”290px”” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”1″ small_header=”0″ hide_cta=”OPTONAL_HIDE_CUSTOM_CTA_BUTTON(1/0)” locale=”NAME_OF_YOUR_LANGUAGE_LOCAE(default en_US)”]
GAE Business Group သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အသစ်ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အညီလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စုစည်း ထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
GAE Business Group ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုမ္မဏီများမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၃၀၉/၂၀၁၅ – ၂၀၁၆(နပတ) ဖြင့် တရားဝင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။
GAE Group ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးပညာရှင်များ၏ အကြံဥာဏ်များဖြင့် အခြားသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု လုပ်ငန်း နယ်ပယ်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့တွင်အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Welcome To GAE Business Group
To beaGreat and Famous Business Group either within Myanmar or Asia.
မြန်မာတွင်သာမက အာရှတလွှား၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်ထင်ရှားသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီး တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။
To do business in ethically and systematically and to take sustainable development and keep it long time.
စနစ်ကျန၍ ကျင့်ဝတ်နှင့်လျော်ညီစွာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်ပြီး ရေရှည်အောင်မြင်မှုများကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်။
၁။ ရိုးသားမှု (Honesty)
၂။ ကြိုးစားမှု (Effort)
၃။ နိုးကြားမှု (Active)
၄။ တိုးပွားမှု (Growth)
၅။ တန်ဖိုးထားမှု (Values)
Green Alliance Energy